Xiddigihii Saaxiibada ahaa ee Lukaku iyo Pogba oo Dagaalay iyo Tababare Solskjaer oo soo kala dhex-galay….(Maxaa la isku qabtay?) – Gool FM
Xiddigihii Saaxiibada ahaa ee Lukaku iyo Pogba oo Dagaalay iyo Tababare Solskjaer oo soo kala dhex-galay….(Maxaa la isku qabtay?)
Byare March 5, 2019
(Manchester) 05 Maarso 2019. Xiddigihii saaxiibada dhow ahaa ee Paul Pogba iyo Romelu Lukaku ayaa is qabtay kaddib guushii dirqiga ahayd ay axadii ka gaareen kooxda Southampton.
Xiddiga qadka dhexe reer France ayaa Lukaku ka hor istaagay fursad uu ku dhalin lahaa Saddexleey maadaama uu isku dhajiyay rigoore ay heshay kooxda waxaana xusid mudan inuu xitaa khasaariyay gool ku laadka uu saaxiibkii u diiday.
Dhaliyaha reer Belgium ayaa dhaliyay labo gool haddii rigoorada loo dhiibana waxaa macquul ahayd inuu dhaliyo goolkiisii saddexaad ee kulanka.
25-jira Lukaku oo careysan ayaa ciyaarta kaddib Pogab u sheegay inuu garabkiisa taagnaa markii ay isku dhacsanaayeen Jose Mourinho isna uu garan waayay inuu Rigoore xun ku sharfo si uu Saddexleey u dhaliyo.
Muranka labada xiddig ayaa xoogeystay ilaa uu markii dambe soo kala dhex galay tababare Ole Gunnar Solskjaer si uu xaalada u dajiyo.
Lukaku ayaa la warinayaa inuu Pogba u sheegay in haddii uu isagu booskiisa taagnaan lahaa uu u dhiibi lahaa Rigoorada si uu Saddexley u dhaliyo.
Weeraryahankii hore ee Chelsea ayaa xitaa tusaale ahaan u soo qaatay Maxamed Saalax kaa oo Roberto Firmino u ogolaaday inuu dhaliyo rigooradii labaad ay heleen ciyaartii ay 5-1 uga adkaadeen Arsenal 29-kii Decembeer si uu u dhaliyo Saddexleey.
Lukaku even cited Mo Salah allowing Roberto Firmino to take Liverpool’s second penalty in a 5-1 destruction of Arsenal on December 29 so he could complete his hat-trick.
Yeelkeede, Pogba ayaa jawaab xun siyay saaxiibkii isagoona ku yiri ‘Anigaa ah shaqsiga rigoorada u tuura kooxda xaq baana u leeyahay’.
“Wuxuu ahaa wada hadalo aad u adag, Lukaku si cad ayuu u muujiyay inuusan ku faraxsanayn waxa uu sameeyay Pogba,” Ilo wareedyo laga helay United ayaa sidaa lagu yiri.
“Si dhaqsi leh ayuu Pogba u xusuusiyay sidii uu u garab taagnaa berigii ay isku dhacsanaayeen Jose Mourinho.
“Murankooda ayaa gaaray heer loo baahdo inuu soo kala dhex galo Solskjaer si xaalada loo dajiyo.”.